बेष्ट फाइनान्सको संस्थापक तथा हकप्रद शेयर लिलामीमा
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक तथा सर्वसाधारणतर्फको नबिकेको अवितरित हकप्रद शेयर लिलामीमा विक्रि गर्ने भएको छ । कम्पनीले कुल ८ लाख २ हजार २२४ दशमलव ४७ कित्ता शेयर लिलामीमा विक्रि गर्न लागेको हो । जसमध्ये ५ लाख ५७ हजार ६७४ दशमलव ५७ कित्ता संस्थापक शेयर रहेको छ भने...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ भदौ २०७६)
यस कम्पनीले बीमा समितिले तोके बमोजिम रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चुक्ता पूँजी बढाएर रू. १ अर्ब कायम गरेको हो । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ६४ करोड १४ लाख २१ हजार थियो । गतवर्ष कम्पनीले अघिल्लो आर्थि...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ भदौ २०७६)
कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरी वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीको हकप्रद तथा ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि चुक्ता पूँजी रू. ९३ करोड ८५ लाख २० हजार पुगेको छ । कम्पनीले बीमा समितिले तोकेको रू. २ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । सोका लागि कम्पनीले हालको पूँजीको आधारमा शतप्रतिशत हकप्रद शे...
डिप्रोक्स लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ भदौ २०७६)
डिप्रोक्स लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्तिको सम्बन्धमा गृहकार्य अघि बढाएको छ कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि आवश्यक छलफल तथा गृहकार्य गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको छ । साउन १६ गते बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि समिति गठन गरेक...
छिमेक लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ भदौ २०७६)
छिमेक लघुवित्तले नेपालभर ६७ जिल्लामा १३४ शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । वित्तीय पहुँच नपुगेका देशका पूर्व र पश्चिमतर्फका २१ ओटा जिल्लाका अतिविकट क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ७९ ओटा डिजिटल प्वाइन्ट मार्फत सेवा दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्...
आशा लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ भदौ २०७६)
यस कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत नगद लाभांश र सोका लागि शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आव २०७५/७६ मा रू. ३ करोड ९१ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २५३ प्रतिशत बढेको हो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ८८ प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा १...
८.४३ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा ३०% को कमी, सोल्टी होटलको सर्वाधिक कारोबार
भदौ ३, काठमाडौं । मंगलवार नेप्से परिसूचक ८ दशमलव ४३ अंक घटेर १ हजार २१३ दशमलव ६३ विन्दुमा आएको छ । यस दिन १ हजार २२२ दशमलव शून्य ५ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको शुरुको १० मिनेटको अवधिमा बढेर १ हजार २२२ दशमलव ८७ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुपश्चात निरन्तर ओरालो लागेको बजार अन्त्यमा शून्य द...